Fil d'actualités du 19/04/2019
19/04/2019 - 09:30 : AFERANA BOADEROZY: Dosie 16 no eny am-pelantanan'ny Fitsarana manokana momba ny boaderozy ka minisitra teo aloha miisa roa no voasaringotra amin'ny raharaha boaderozy sarona tany Singapour.
19/04/2019 - 09:00 : CENI: Tompon'andraikitra miisa 20 tany amin'ny ratsa-mangaikan'ny CENI no nesorina noho ny fitanilana ara-politika.
Archive du 20180929
Marc Ravalomanana « Tsy maintsy mangarahara ny fitantanana ny firenena »
Anio 29 sabotsy 29 Septambra 2018 amin'ny 4 ora tolakandro ao amin'ny Le Millenaire Savigny le Temple any Parisy no hanasan’i Marc Ravalomanana Kandida laharana faha-25 ny Malagasy monina any Frantsa sy Eoropa.
Fampihorohoroana ao Morondava Tompon’antoka ny olon’ny MAPAR
Zary lasa afobe ho an’ny vahiny sy ny mpizaha tany ny fihetsika mamoafady, nivaona tamin’ny hetsi-pitakiana momba ny fanenjehana olona voafonja nahazo fahafana vonjimaika sy ny fitakiana fisitrahana ranon’i Dabaraha tao Morondava nanomboka ny alakamisy 27
Kandida Dama Maniry ny hihaona amin-dRajao, Ravalo ary Rajoelina
Araka ny vaovao nivoaka tetsy anivon’ny birao fiasan’ny antoko politika Manajary Vahoaka na ilay antoko manohana ny kandida ho filoham-pirenena, Zafimahaleo Rasolofondraosolo, fantatra amin’ny hoe Dama Mahaleo,
Fikarakarana ny fifidianana Nokianin`ny SEFAFI mafy ny CENI
Herinandro sisa dia hisokatra amin’ny fomba ofisialy ny fampielezan-kevitra, ny mpifidy anefa dia mbola miandry foana ny hamoahan’ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) ny toromarika ilaina mikasika ny fizotran’ny fifidianana.
Izay manao ny tsara, hono, no manaranara. Izay manao ny tsara no tsara fiafara. Fahendrena malagasy koa ny hoe ny ratsy atao loza miantona. Ny soa atao ilevenam-bola.
Thierry Rakotonarivo -CENI “Hetsika an-tsitrapo ny fisoratana anarana fa tsy terena”
Vao tsikera mafy ny Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana (CENI) manoloana ny fizotran`ny fifidianana Filohan`ny Repoblika ho avy izao. Biletà tokana, lisim-pifidianana,biraom-pifidianana, fanaraha-maso…
Dinika fanavotam-pirenena Miomana hitory kandida sy ireo mpanohana azy
Nanamafy omaly ny avy eo anivon’ny Dinika fanavotam-pirenena sy ny filohan’izy ireo, Doudou na Tolojanahary Maharavo, fa hanara-maso ny fifidianana.
RMTF « An-jatony miliara ariary no mahatafiditra fihodinana faharoa. »
Niverina niteny indray omaly ry zareo avy eo anivon’ny rodoben’ny malagasy tia tanindrazana ho an’ny fanorenana ifotony.
Printsy Elakovelo Ny Amiraly Ratsiraka ihany no afaka hanavotra an’i Madagasikara
Nivoaka tamin’ny fahanginana indray ny Printsy Elakovelo mpiara-dia amin’ny antoko AREMA omaly manoloana ny zava-mitranga eto amin’ny firenena.
Praiministra Ntsay Christian Nihaona tamin’ny Ambasadaoro Aostralianina sy ny delegasionin’ny SADC
Nifandimby nihaona tamin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian teny Mahazoarivo omaly, Ramatoa Jenny Dee, Ambasadaoro Aostralianina izay hiandraikitra an’i Madagasikara ary monina atsy amin’ny Nosy Maorisy; sy ny iraka manokana avy amin’ny SADC notarihin’Atoa Mpho Molomo.
Fihaonan’i Madagasikara sy Sénégal nisy faty olona Nosazian’ny CAF handoa lamandy 10 000 dolara ny FMF
Nosazian'ny Kaonfederasionina Afrikanina momba ny baolina kitra na ny CAF handoa lamandy 10 000 dolara ny Federasionina Malagasin’ny Baolina kitra na ny
Amboaran’ny « Telma Coupe de Madagascar 2018 » Tsy maintsy horombahin’ny Elgeco Plus hoy Alfred filohany
Handrasan’ny mpitia baolina kitra Malagasy fatratra ireo lalao manasa-dalana roa ho tontosaina etsy amin’ny kianjan’i Mahamasina rahampitso alahady 30
Rugby Tournoi Mazavaloha Raikitra etsy Malacam ny famaranana
Ela ny ela fa ho tontosaina etsy amin’ny kianjan’i Malacam Antanimena rahampitso alahady 30 septambra ireo lalao famaranana 2 amin’ny lalao rugby « Tounoi Mazavaloha ».
Fifidianana ho filohan’ny FMF ny 27 oktobra 2018 I « Hery Be » no nandrotsaka antontan-taratasy voalohany
Na dia teo amin’ny sehatry ny fifaninana rallye aza no tena nahafantaran’ny maro azy dia efa nilona ela tao anatin'ny tontolon'ny baolina kitra Malagasy nandritry ny taona maro i Hery Be “Rasoamaromaka Hery”
Karting-Tompondakan’i Madagasikara Rahampitso ny dingana faha 3 eny Imerintsiatosika
Ho tanterahana rahampitso alahady 30 septambra manomboka amin’ny 8 ora maraina eny amin’ny SRK Imerintsiatosika ny dingana fahatelo amin’ny fifaninana Karting ao anatin’ny fiadiana izay ho tompondakan ‘i Madagasikara.Zava-dehibe
Fialan-tsasatra hieren-doza Nametraka fepetra ny ATT
Mifanindry amin’ny fialan-tsasatry ny mpianatra ireo zaikaben’ny fiangonana maro samihafa nohon’ireny fihemoran’ny fanadinana maro samihafa ireny.
Fampihenana ny lozam-pifamoivozana Hisy ny diabe am-pilaminana anio
Misy ny hetsika izay karakarain’ny media project mitondra ny lohateny hoe “aok’izay ny loza” (stop accident) atao anio sabotsy 29 septambra manomboka amin’ny 9ora maraina hiainga etsy amin’ny Parvis lapan’ny fanatanjahan-tena Mahamasina.
Taksibe sy fiara kely nifandona Mpivady indray maty teny amin’ny By Pass
Olona roa no indray namoy ny ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana mahatsiravina teny amin’ny By Pass, tsy lavitry ny “Rond point” eo Ambohimanambola omaly tolakandro tokony ho tamin’ny 3 ora latsaka kely teo ho eo.
Ivandry Mpitondra môtô nifatratra tany ambany fiara 4x4
Mpitondra môtô scooter iray no voatery nosokirina tao ambany fiara 4x4 omaly zoma hariva teny Ivandry.
Sekoly ambony ISFPS Leader Hanampy ireo mpianatra vao afa-panadinana Bakalôrea
Hanampy ireo mpianatra vao afa-panadinana bakalôrea ny sekoly ambony ISFPS Leader manerana ny Nosy.
Fampiroboroboana ny sehatra ara-barotry ny Oseana Indiana Nanome 2,4 tapitrisa Euros ny AFD
Nifarana omaly tetsy amin’ny village Voara Andohatapenaka manomboka ny fihaonam-be ara-toekarenan’ny nosy manodidina ny Oseana Indiana andiany faha -11.
Famokarana horonantsary sy raki-peo Mitsangana ny Métatron Production
Nampahafantarina teny ankatso afak’omaly ny fitsanganan’ny tranom-pamokarana ara-tserasera “Metatron production” izay hisandrahaka amin’ny asa famokarana horonantsary sy raki-peo isan-karazany.
Nosintomin’ny efa-dahy avy eny ambony moto roa ny olona efatra izay nitaingina an’izany.
Nanambara ny mpanao politika, Edouard Tsarahame, fa ny HCC na niteny aza hoe tsy azo hahemotra ny fifidianana dia tsy nilaza izy ireo fa tomponandraikitra amin’izay zavatra hiseho aorian’izay fifidianana izay. Tokony nilaza, hoy izy, ny HCC fa ho tompon’antoka amin’izay zava-mitranga aorian’ny fifidianana.
Mpivarotra eo amin’ny Esplanade Analakely Nankasitraka ny vahaolana sy fandaminan’ny CUA
Miroso tsikelikely amin’ny fandaminana ny mpivarotra amoron-dalana ny kaominina Antananarivo renivohitra (CUA), mba hanatsarana endrika ny renivohitra ho soa iombonan’ny Malagasy, araka ny teny filamatry ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana.
Sampana mpamonjy voina Tsaralalana Ho afaka hiditra amin’ny toerana saro-dalana amin’izay
Ho afaka hiasa any amin’ireo toerana saro-dalana amin’izay manomboka izao ny mpamonjy voina eto Antananarivo Renivohitra.
Famerenana ny hasin`ny fitsarana Mila midina ifotony ny tompon’andraikitra
Tsy mahatoky ny rafim-pitsarana intsony ny vahoaka ankehitriny. Hita sy re etsy sy eroa fa marefo ny Fitsarana eto Madagasikara.
Sehatra tsy azo ihidivirana amin’izao fotoana izao ny sehatra angovo satria mifandray tanteraka amin’ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy izany.
Fanodikodinam-bola tao amin’ny Croix Rouge Malagasy Olona 3 naiditra am-ponja vonjimaika
Fantatra izao fa vita ny ampahana fanadihadiana nataon’ny Bianco momba ny resaka fanodinkodinana volabe tsy toko tsy forohana tao amin’ny Croix Rouge Malagasy.